သပေနျးကို ပှငျ့စသေူမြား – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 20, 2020 May 20, 2020 kyaw zaw oo
ရခိုင်​စစ်​​မြေပြင်​မှာ ကျဆုံးတဲ့ မြန်​မာလူငယ်​​တွေရဲ့ (​ကြေငြာ အသိအမှတ်​ပြုခြင်း မခံရတဲ့) အသက်​​တွေအတွက်​ ဘယ်​သူ​တွေ တာဝန်​ရှိသလဲ။
ရခိုင်​စစ်​​မြေပြင်​မှာ ကျဆုံး​သွားပြီးဖြစ်​တဲ့ . . . စစ်​ပွဲ၏ သဘာဝအ​လျောက်​ ​စစ်​ပွဲရှိ​နေသမျှကာလ ပတ်​လုံး ကျဆုံးမယ့်​ အလားအလာလည်း ရှိ​နေဆဲဖြစ်​တဲ့ . . . မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​သား မြန်​မာလူငယ်​များရဲ့ အသက်​​တွေကို ကျွန်​​တော်​ နှ​မြောမိပါတယ်​။
နိုင်​ငံကို ​ခေါင်း​ဆောင်​​ခွင့်​ရ​နေသူအချို့ဟာ ရင်းမြစ်​​တွေကို လုပ်​ပိုင်​ခွင့်​​​တွေကို ဘယ်​လိုမျိုးတရားမျှတစွာ ခွဲ​ဝေတည်​​ဆောက်​ကြမလဲ ဆိုတဲ့ နိုင်​ငံတည်​​ဆောက်​​ရေးကို ဦးတည်​​သော . . . စိတ်​ခံစားမှု​တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မခံ​သော . . . လုပ်​​ဆောင်​ချက်​​တွေကို လုပ်​​ဆောင်​ကြမယ့်​အစား၊ ငါတ​ကော​ကောတဲ့ စိတ်​ခံစားမှု​တွေကို အ​ခြေခံ​သော သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်​ညွှန်​ကြားလုပ်​​ဆောင်​မှု​တွေ​ကြောင့်​ တိုင်းပြည်​ဟာ စစ်​နွံအတွင်းမှာ စတင်​ နစ်​မွန်း​နေပြီလို့ အကဲခတ်​များစွာက ​ပြော​နေကြတာရှိပါတယ်​။
​ဒေါက်​တာ​အေး​မောင်​ရဲ့ ​ဟော​ပြောပွဲ​ပြောကြားချက်​စကားအချက်​အလက်​အချို့ကို အ​ခြေခံပြီး ​၎င်းကို တရားစွဲဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်​ခဲ့ကြတဲ့ အာဏာပိုင်​​တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ဟာ နိုင်​ငံ တည်​​ဆောက်​​ရေးကို ဦးတည်​မ​နေဘဲ ငါတ​ကော​ကောစိတ်​​တွေကို အ​ခြေခံပြီး လုပ်​​ဆောင်​ခဲ့တာ ဖြစ်​နိုင်​တယ်​ လို့ မှတ်​ယူ​နေကြပါတယ်​။ (တရားစွဲသူ​တွေအ​ပေါ် ဦးတည်​ သုံးသပ်​ချက်​ ဖြစ်ပါတယ်​။)
အခြားအဖွဲ့အစည်း​တွေကို အကြမ်းဖက်​အုပ်​စုအဖြစ်​ ကိုယ့်​ဘက်​က ​ကြေငြာ​နေချိန်​မှာ မြန်​မာနိုင်​ငံဟာ ဂျန်​နိုဆိုက်​နဲ့ ICJ မှာ တရားစွဲခံရတယ်​။ ​ငွေ​ကြေးခဝါချမှုနဲ့ပတ်​သက်​လို့ စိတ်​မချရတဲ့ နိုင်​ငံအဖြစ်​ သတ်​မှတ်​ခြင်းခံရတယ်​။
ရခိုင်​​တွေကို နိုင်​ငံ​ရေးအရ ဆက်​လက်​လုပ်​ကိုင်​ဖို့ရာ နည်းလမ်းဘာမှ မရှိ​တော့ဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အထိဖြစ်​​အောင်​ ဆုံးဖြတ်​ချက်​အမှား​တွေ ဆုံးဖြတ်​လုပ်​​ဆောင်​ခဲ့တဲ့ နိုင်​ငံ​ခေါင်း​ဆောင်​ဆိုသူ​တွေမှာ အများကြီးတာဝန်​ရှိပါတယ်​။
နိုင်​ငံကိုမှားယွင်းတဲ့ လမ်း​ကြောင်း​ပေါ်သို့ ​မောင်းသွင်း​နေတဲ့ တလွဲနိုင်​ငံ​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​အမှား​တွေ​ကြောင့်​ မြန်​မာလူငယ်​​တွေရဲ့ အသက်​​တွေ ရခိုင်​စစ်​​မြေပြင်​မှာ မ​သေသင့်​ဘဲ ​သေသွားခဲ့ရတယ်​၊ အပြစ်​မဲ့ ချင်း နဲ့ ရခိုင်​အရပ်​သား အသက်​များစွာကို ​သေဆုံးမှု ဖြစ်​​စေခဲ့တယ်​ လို့ ​နောက်​​နောင်​ သမိုင်းစာမျက်​နှာမှာ ​ရေးမှတ်​ခြင်း မခံကြရဖို့ လိုပါတယ်​။
အပြစ်​ရှိ​ကြောင်း ဆုံးဖြတ်​ချက်​အတည်​ဖြစ်​ပြီးတဲ့ (convicted ဖြစ်​ပြီးတဲ့) ​ဒေါက်​တာ​အေး​မောင်​အား လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်​ အဖြစ်​က ရပ်​စဲတဲ့အပြင်​ ​နောက်​​နောင်​ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ​တွေမှာ ​ရွေး​ကောက်​ခံပိုင်​ခွင့်​ မရှိ​တော့​ကြောင်း ဒီက​နေ့ ​ကြေငြာချက်​ကို ကျွန်​​တော်​ ဖတ်​ရပါတယ်​။ တရားစီရင်​မှုဖြစ်​စဉ်​နဲ့ UEC က ထပ်​ဆင့်​ လုပ်​​ဆောင်​ရတာ​တွေအ​ပေါ်မှာ ဒီက​နေ့ မ​ပြောလို​ပေမယ့်​ ဒီအ​နေအထားကို ​ရောက်​လာ​အောင်​ ဒီပြစ်​မှုကြီး​တွေနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်​ခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင်​​တွေကို အပြစ်​ဆိုပါတယ်​။
၂၀ ​မေလ ၂၀၂၀
ရခိုငျစဈမွပွေငျမှာ ကဆြုံးတဲ့ မွနျမာလူငယျတှရေဲ့ (ကွငွော အသိအမှတျပွုခွငျး မခံရတဲ့) အသကျတှအေတှကျ ဘယျသူတှေ တာဝနျရှိသလဲ။
ရခိုငျစဈမွပွေငျမှာ ကဆြုံးသှားပွီးဖွဈတဲ့ . . . စဈပှဲ၏ သဘာဝအလြောကျ စဈပှဲရှိနသေမြှကာလ ပတျလုံး ကဆြုံးမယျ့ အလားအလာလညျး ရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ . . . မွနျမာ့တပျမတျောသား မွနျမာလူငယျမြားရဲ့ အသကျတှကေို ကြှနျတျော နှမွောမိပါတယျ။
နိုငျငံကို ခေါငျးဆောငျခှငျ့ရနသေူအခြို့ဟာ ရငျးမွဈတှကေို လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို ဘယျလိုမြိုးတရားမြှတစှာ ခှဲဝတေညျဆောကျကွမလဲ ဆိုတဲ့ နိုငျငံတညျဆောကျရေးကို ဦးတညျသော . . . စိတျခံစားမှုတှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုကို မခံသော . . . လုပျဆောငျခကျြတှကေို လုပျဆောငျကွမယျ့အစား၊ ငါတကောကောတဲ့ စိတျခံစားမှုတှကေို အခွခေံသော သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖွတျညှနျကွားလုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ တိုငျးပွညျဟာ စဈနှံအတှငျးမှာ စတငျ နဈမှနျးနပွေီလို့ အကဲခတျမြားစှာက ပွောနကွေတာရှိပါတယျ။
ဒေါကျတာအေးမောငျရဲ့ ဟောပွောပှဲပွောကွားခကျြစကားအခကျြအလကျအခြို့ကို အခွခေံပွီး ၎င်းငျးကို တရားစှဲဆိုဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတဲ့ အာဏာပိုငျတှရေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြဟာ နိုငျငံ တညျဆောကျရေးကို ဦးတညျမနဘေဲ ငါတကောကောစိတျတှကေို အခွခေံပွီး လုပျဆောငျခဲ့တာ ဖွဈနိုငျတယျ လို့ မှတျယူနကွေပါတယျ။ (တရားစှဲသူတှအေပျေါ ဦးတညျ သုံးသပျခကျြ ဖွဈပါတယျ။)
အခွားအဖှဲ့အစညျးတှကေို အကွမျးဖကျအုပျစုအဖွဈ ကိုယျ့ဘကျက ကွငွောနခြေိနျမှာ မွနျမာနိုငျငံဟာ ဂနျြနိုဆိုကျနဲ့ ICJ မှာ တရားစှဲခံရတယျ။ ငှကွေေးခဝါခမြှုနဲ့ပတျသကျလို့ စိတျမခရြတဲ့ နိုငျငံအဖွဈ သတျမှတျခွငျးခံရတယျ။
ရခိုငျတှကေို နိုငျငံရေးအရ ဆကျလကျလုပျကိုငျဖို့ရာ နညျးလမျးဘာမှ မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အထိဖွဈအောငျ ဆုံးဖွတျခကျြအမှားတှေ ဆုံးဖွတျလုပျဆောငျခဲ့တဲ့ နိုငျငံခေါငျးဆောငျဆိုသူတှမှော အမြားကွီးတာဝနျရှိပါတယျ။
နိုငျငံကိုမှားယှငျးတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါသို့ မောငျးသှငျးနတေဲ့ တလှဲနိုငျငံခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအမှားတှကွေောငျ့ မွနျမာလူငယျတှရေဲ့ အသကျတှေ ရခိုငျစဈမွပွေငျမှာ မသသေငျ့ဘဲ သသှေားခဲ့ရတယျ၊ အပွဈမဲ့ ခငျြး နဲ့ ရခိုငျအရပျသား အသကျမြားစှာကို သဆေုံးမှု ဖွဈစခေဲ့တယျ လို့ နောကျနောငျ သမိုငျးစာမကျြနှာမှာ ရေးမှတျခွငျး မခံကွရဖို့ လိုပါတယျ။
အပွဈရှိကွောငျး ဆုံးဖွတျခကျြအတညျဖွဈပွီးတဲ့ (convicted ဖွဈပွီးတဲ့) ဒေါကျတာအေးမောငျအား လှတျတျောကိုယျစားလှယျ အဖွဈက ရပျစဲတဲ့အပွငျ နောကျနောငျ ရှေးကောကျပှဲတှမှော ရှေးကောကျခံပိုငျခှငျ့ မရှိတော့ကွောငျး ဒီကနေ့ ကွငွောခကျြကို ကြှနျတျော ဖတျရပါတယျ။ တရားစီရငျမှုဖွဈစဉျနဲ့ UEC က ထပျဆငျ့ လုပျဆောငျရတာတှအေပျေါမှာ ဒီကနေ့ မပွောလိုပမေယျ့ ဒီအနအေထားကို ရောကျလာအောငျ ဒီပွဈမှုကွီးတှနေဲ့တရားစှဲဆိုဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ အာဏာပိုငျတှကေို အပွဈဆိုပါတယျ။
၂၀ မလေ ၂၀၂၀
Previous ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါ ရငျဆိုငျနရေသညျ့ ယခုကာလအတှငျး စဈမှနျသော အပဈအခတျ ရပျစဲရေးအား ကွငွောအကောငျအထညျဖျောစလေိုကွောငျး သဘောထားဖျောပွခကျြ
Next မောငျတော ၏ ကိုဗဈအရေး အလှနျအန်တရာယျကွီးသညျ့အကွောငျး